Ummeli Wefa e-Dubai UAE | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Umthetho wefa: Izinkantolo ze-UAE ekusatshalalisweni kwezimpahla
Umthombo oyinhloko womthetho wamafa e-UAE umthetho weShararia futhi ngenxa yemithetho ethile ye-Federal eyamiswa. Ngaphandle kwalokhu, imithetho eyinhloko elawula ukulandelana yi-Civil Law noMthetho Womuntu.
awuyena owezizwe we-UAE
Umthetho wefa le-UAE
umthetho wefa e-UAE ungaba yinkimbinkimbi
Umthetho wefa e-UAE ubanzi kakhulu futhi ungamukela wonke umuntu ngokungakhathalekile ukuthi ungowasiphi isizwe kanye nenkolo. Ukulandelana kwamaSulumane kulawulwa yi-Shariya Law lapho abantu abangawona amaSulumane abagunyaziwe ukukhetha umthetho wezwe labo. IShariah Law iyakwazi ukuyihumusha futhi iguqule futhi.
Ngaphezu kwalokho, ngokuba amandla emithetho yomphakathi, umthelela wezinto ezandulelayo awunalutho uma uqhathaniswa nemithetho ejwayelekile yomthetho. Ngokuqhathanisa neziphathimandla ezithile, i-UAE ayilandeli ilungelo lokusinda lapho izakhiwo ezihlangene zizonikezwa abanikazi abasindile futhi izinkantolo ze-UAE zinegunya elikhethekile lokuthatha izinqumo ngalezi zindaba.
Abadliwayo kanye nezindlalifa banelungelo lokufaka isicelo
Inzalo kanye nezindlalifa zinelungelo lokufuna ifa lomuntu oshonile ngokuhambisana nomthetho weShariah kumaSulumane. Abahlomula ngaleli tulo bangafaka ifa uma kwenzeka kungewona amaSulumane uma kunemvume evunyelwe ngokusemthethweni. Endabeni yamaSulumane ashonile, ifa lizodluliselwa kuphela kulabo abafanelekayo njengendlalifa ngaphansi kwemigomo yeShariah.
Izimiso zomthetho kaSharariya
Isinyathelo sezinkantolo uma kubulawa umSulumane ukuthola izindlalifa bese ziphinde ziqinisekiswe ngofakazi besilisa abangu-2 abanobufakazi bemibhalo efana nesitifiketi sokuzalwa kanye nesitifiketi somshado. Ngokusekelwe ezimisweni ze-Shariya, abazukulu, abazali, abashade naye, izingane, izingane zomshana noma umshana, nezingane zakwabo zibhekwa njengezindlalifa zefa.
Okufanele Ukwazi nge-WILL?
I-Will ngokuyisisekelo iyithuluzi elivame kakhulu elisetshenziselwa ukudlulisa impahla kubazuzi abakhethwe ngofileyo. Empeleni kunemininingwane yokuthi ufuna ukuthi impahla yakho ihanjiswe kanjani ngemuva kokushona kwakho.
Ngaphandle kokunquma ukuthi ngubani okufanele azuze ifa lakho, amafa angasetshenziswa futhi ekucaciseni izifiso ezithile kubandakanya izipho ezithile, abaphathi kanye nabaqaphi besikhathi eside bezingane. Ngaphandle kokuthanda, umuntu angahle athathe isinyathelo futhi uma kuziwa ekuhleleni amasu wokuphamba kubandakanya nezisombululo ezivulekile zolwandle noma ukusungula ukwethenjwa.
Kungani ama-expats kufanele abe ne-AU ku-UAE?
Ngokukhuluma okuhlala e-UAE, kunesizathu esilula sokwenza intando. Iwebhusayithi esemthethweni kaHulumeni waseDubai ithi amaKhotho e-UAE azobambelela emthethweni weSharariya kunoma yisiphi isimo lapho kungekho khona intando. Kusho ukuthi uma usufa ngaphandle kwecebo noma ilandelana, izinkantolo zasekhaya ziyohlola yonke impahla yakho bese zisabalalisa lokho ngokusekelwe kumthetho weShararia. Isibonelo, unkosikazi onezingane uyakufanelekela ukuthola u-1/8 wefa lomyeni oshonile.
Ngaphandle kokuhlelwa kwezakhiwo noma intando, ukusatshalaliswa kuzosetshenziswa ngokuzenzakalelayo. Yonke impahla yomuntu oshonile kufaka phakathi ama-akhawunti asebhange izokwakhiwa iqhwa kuze kukhululwe izikweletu. Ngisho nezimpahla ezabiwe zineqhwa kuze kuba inkinga yefa inqunywa izinkantolo zasendaweni. Futhi akukho okudluliselwa okwabiwayo okuzenzakalelayo lapho ibhizinisi lithintekayo.
Ukukhathazeka Ngefa Lejwayelekile
Kaningi kunalokho, ukukhathazeka okujwayelekile kuvela ekuthengeni okuthengile izakhiwo e-UAE kungaba ngegama labo noma nomlingani wabo. Bangadideka ukuthi yimiphi imithetho elifa elisebenza ezimpahleni zabo futhi bavame ukucabanga ukuthi imithetho yezwe labo isebenza ngokwayo emithethweni yasekhaya e-UAE.
Umthetho wegolide wesithupha ngukuthi izinkinga zamafa ezimweni ezinjalo empeleni kubhekwana nazo ngokusekelwe kwi-Sharia. Ukulandelana ngaphansi kwalo mthetho kusebenza ngokuyinhloko ngohlelo lwamasheya agodliwe noma ifa eliphoqiwe.
Kulabo abangewona amaSulumane, banenketho yokubhalisa incwadi yemvume ne-DIFC WPR ezonikeza isiqiniseko sokudlulisela amafa abo eDubai kwizindlalifa zabo ezikhethiwe noma bangadlulisela indawo kwenye inkampani phesheya kwezilwandle. Izisombululo ezinikezwayo zincike kuwo wonke amacala ngakho-ke ukubonisana kwezomthetho kumele kwafunwa kusukela ekuqaleni.
Kungani Kufanele Uqashe Isazi Sommeli Kwamafa E-UAE?
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele uqashe uchwepheshe wabameli emthethweni wefa we-UAE. Ezinye zazo zifaka okulandelayo:
Umthetho wefa le-UAE wehlukile kwelinye Izwe
Uma ucabanga ukuthi izwe lakho lasekhaya linemithetho efanayo uma kukhulunywa ngomthetho wamafa e-UAE, ungangena enkingeni. Kufanele uqaphele ukuthi imithetho, ngaphandle kwemikhakha, yehlukile ezweni ngalinye. Uma unokukhathazeka ngefa e-UAE, kufanele ufune usizo lwezomthetho kummeli ose-UAE futhi uchwepheshe wezomthetho wefa.
Umthetho wefa le-UAE akuyona into elula ukuyiqonda
Akunandaba ukuthi yini ukukhathazeka kwakho elifeni lakho, kufanele wazi ukuthi umthetho wamafa e-UAE ungabinkimbinkimbi futhi akulula njengoba iningi lakho licabanga. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma ungeyena owesizwe we-UAE futhi ungenayo inkomba yokuthi imiphi imithetho nemigomo ngaphansi kwalo mthetho.
Uma ungumuntu kazwelonke we-UAE futhi ungafuni ukuzwa noma yikuphi ukuphazamiseka noma ezinye izinkinga ezingenzeka ngefa lakho, kungcono ukuqasha ummeli ukuze akusize. Noma ngabe unolwazi olungakanani ngomthetho wefa e-UAE, izinsizakalo zezomthetho zommeli zingase zifike ngesikhathi esithile.
Thola Ukuthula Kwengqondo Lapho Usebenzelana Nezinkathazo Zamafa
Ummeli wakho omkhethile kuzoba nguyena obhekele konke okudingayo ukuxazulula izinkinga zakho zezomthetho zefa lakho. Noma ngabe inkinga yakho inkulu noma incane, ungaqiniseka ukuthi ummeli wamafa we-UAE onolwazi futhi ofanelekile ngeke akunikeze lutho ngaphandle kokuthula kwengqondo kanye nokulula kuyo yonke inqubo.
Qasha Ummeli Omuhle Wokuthola Leli Lifa e-UAE Namuhla!
Abaxoshwa abaningi abahlala e-UAE abazi ukuthi uma ingekho i-WILL, eyamukelwa uhlelo lwezomthetho lwe-UAE, inqubo noma umkhuba wokudlulisela izimpahla zabo ngemuva kokushona kungadla isikhathi, kubize futhi kugcwale ubulukhuni bezomthetho.
Uma kukhulunywa ngezinkinga zefa eDubai UAE, kuhlale kuwukuhlakanipha ukuqasha ummeli womsebenzi. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma ungum-expat futhi ungazi ngemithetho yefa ye-UAE. Khumbula ukuthi imithetho ephathelene namafa ifani iyahluka emazweni. Ngakho-ke, qiniseka ukuthola ummeli wefa ofanele eDubai UAE ukuze uthole ukuthula kwengqondo.
Vikela umndeni wakho namafa
Ummeli wobulelesi oqinisekisiwe angakusiza.